China Waterproof Cable Assembly, DC Connector fekitori uye vagadziri | Olink
isina mvura tambo yegungano
Model Nhamba: mota tambo sunga 66
Nzvimbo Yekutanga: Olink
Unyanzvi: 1.5 USD
MOQ: 20 * 20 * 10 Masendimita
SGS IATF16949, CE chitupa tambo
Plastiki goko: nylon PA66
Terminal: tinned mhangura
Waya: yemhangura musimboti, PVC bhachi
Rated tembiricha: -25 kusvika + 85 ° C
Waya sunga: PVC, rabha, silicone
Kushanda frequency: 50 / 60Hz
Zvinoshanda zvazvino: 3A
Inoshanda voltage: 250V AC / DC
Kukurumidza kupisa: 94V, VW-1, CSA FT1
1 maConnectors anogona kunge ari TE, Molex, JST, Deutsch, Hirschmann, Delphi, FCI kana zvakaenzana.
2 Tambo dzinogona kushandisa UL.CCC, CE.VDE, CSA, AS / NZ, PSE yakaratidza.
3 Yemahara Samples inogona kupihwa mushure kwekutora kwakasimbiswa.
4 Yakasimba kudzora kwemhando inotevera ISO management system.
5 Zvese zvigadzirwa zviri 100% bvunzo usati wasununguka
6 Mhando dzese dzezvigadzirwa zvedu ROHS inoenderana.
7 ODM / OEM odha, kutongwa odha uye yakagadzirirwa tambo inogamuchirwa.
8 Mainjiniya edu ane zvinopfuura gumi nezviviri zvechiitiko pane wiring sunga dhizaini kuti tikwanise kushanda newe kuti uwane mhinduro yakanakisa kwete chete yekusangana nezvinodiwa asiwo kudzora mutengo.
Tambo tambo inowanzo gadzirirwa kurerutsa kugadzirwa kwechinhu hombe, uye yakagadzirirwa zvichienderana nejometri uye zvemagetsi zvinodiwa zvemidziyo iyo yekuiswa mukati.
Waya mahanesi anowanzo shandiswa mumagetsi indasitiri, indasitiri yemotokari, mukugadzira michina yekuvaka nemidziyo yekumaindasitiri, pamwe nekugadzira zvinhu zvichena semuchina wekuwachisa uye maomesa, mafiriji, nemimwe midziyo yemumba.
Iyo tambo tambo inorerutsa kuvakwa kwezvinhu izvi zvakakura nekubatanidza iyo wiring mune imwechete unit, kana akati wandei mayuniti, e "kudonhedza-mukati" kuiswa Nekusunga iyo yakawanda tambo, tambo, uye subassemblies kuita harness, iyo OEM kana inosimudza inongova nechinhu chimwe chete chekuisa. Uye zvakare, tambo tambo inobvumira iyo yakapedzwa musangano kuti ive yakachengetedzeka zvirinani kubva pamhedzisiro yekukonzeresa uye kudengenyeka, uye nekudzora tambo mune isiri-inochinja bundle, kushandiswa kwenzvimbo kunogoneswa.
Kana kamwe dhizaini ikagadzwa, maitiro ekuvaka tambo tambo anotanga nekuvandudzwa kwechirongwa chinoshandiswa kugadzira mapepa ekugadzira uye bhodhi regungano rehanyo. Iyo gungano bhodhi, kana pini bhodhi, izere saizi dhayagiramu yeiyo harness uye inoratidza zvese izvo zvinhu pamwe nenzvimbo yadzo uye zvakare inoshanda sebhenji rebasa rehanyo. Tambo dzinodiwa pakuisa dzinoiswa pane tenzi reel uye dzinochekwa kusvika pahurefu hunodiwa uye dzinoonekwa nekudhinda kana kunyora mazita kana zvichidikanwa. Kana dzangodimburwa kusvika pakureba chaiko, waya dzinobviswa kufumura isina kuvharwa kondakita ndokuzogadzirirwa chero zviteshi zvinodikanwa kana dzimba dzekubatanidza. Idzi waya uye zvinoriumba zvino zvinoiswa pabhodhi repini uye zvakasungwa pamwechete nechero mabhanhire anodikanwa, tambo dzetambo, kusungira tambo, sleeve, matepi, kurukwa kwetambo yakabviswa, kana chero musanganiswa weizvi.
Kunyangwe paine chishuwo chekuwedzera otomatiki, waya mahanesi, kazhinji, anoramba achigadzirwa nemaoko nekuda kwenzira dzakasiyana dzakasiyana dzakabatanidzwa.
Pashure: Mvura Isina Mvura Cable, DB 24pin Connector
Zvadaro: Mvura Isina Kubatanidza Kune DC Cable
Cable Assembly YeMotokari
Cable Assembly YeMagetsi
Cable Assembly Yekushandisa Kumba
90 ° USB Cable Kune IP67 Mvura Isina Tambo
Mvura Isina Kubatanidza Kune DC Cable
J45-RJ45 Isina Mvura Cable Assembly
Mvura Isina Mvura Cable, DB 24pin Connector
IP67 Yemvura Inoratidza Kodhi Kereke